बिश्वभर काेराेना भाइरस संक्रमितमध्ये ३५ प्रतिशत बढी निकाे भए, कुन देशकाे अवस्था कस्ताे छ ? « Daily News Bank
बिश्वभर काेराेना भाइरस संक्रमितमध्ये ३५ प्रतिशत बढी निकाे भए, कुन देशकाे अवस्था कस्ताे छ ?
काठमाडाैं, २९ वैशाख ।
विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुनेकाे संख्या ४१ लाख नाघेकाे छ । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार साेमबार बिहानसम्म काेराेना संक्रमितकाे संख्या ४१ लाख ७९ हजार ८३९ पुगेकाे छ ।
कुल सङ्क्रमितमध्ये ३५.६५ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९० हजार ५११ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । याे निकाे हुनेकाे संख्या ज्यान गुमाउनेकाे भन्दा ५.२५ गुणा बढी हाे । अहिलेसम्म २ लाख ८३ हजार ८५० जनाले काेराेनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
पछिल्लाे २४ घण्टभित्र काेराेनाका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या स्वाट्टै घटेकाे पाइएकाे छ । अाइतबार विश्वभर काेराेनाका कारण ३ हजार ५ सय १० जनाकाे मात्रै मृत्यु भएकाे वर्ल्डो मिटर्सले जनाएकाे छ । यसअघि दैनिक रूपमा ५ हजार भन्दा बढी मृत्यु हुने गरेकाे थियाे । पछिल्लाे २४ घण्टामा ७९ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा ८० हजार ७८७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितकाे संख्या भने १३ लाख ६७ हजार ६३८ पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये २ लाख ५६ हजार ३३६ भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ १० लाख ३० हजार बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १६ हजार ५१४ अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाले भयावह पारेको अर्को देश हो, स्पेन । अहिलेसम्म स्पेनमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या २ लाख ६४ हजार ६६३ पुगेकाे छ । स्पेनमा कोरोनाका कारण २६ हजार ६२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
संक्रमितमध्ये १ लाख ७६ हजार ४३९ भने पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ६१ हजार ६०३ जनामा कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये १ हजार ६५० काे अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
इटालीमा स्पेनमा भन्दा कम संक्रमित भए पनि मृत्यु हुनेकाे संख्या भने बढी रहेकाे छ । अहिलेसम्म इटालीमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या ३० हजार ५६० पुगेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ २ लाख १९ हजार कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
संक्रमितमध्ये १ लाख ५ हजार पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले इटालीमा ८३ हजार बढीमा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ भने एक हजार बढीकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
अमेरिकापछि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा बेलायत पर्छ । अहिलेसम्म बेलायतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या ३१ हजार ८५५ पुगेकाे छ । संक्रमितकाे संख्या भने २ लाख १९ हजार नाघेकाे छ ।
बेलायतमा पूर्ण निको हुनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ । त्यहाँ अहिले १ लाख ८६ हजार ९८४ जनामा कोरोना सक्रिय रहेको छ भने १५ सय बढीकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
पछिल्लाे समय काेराेना भाइरसको नयाँ हटस्पट रूस बनेकाे छ । केही दिनयता लगातार दिनहुँ १० हजार बढी संक्रमित थपिने गरेकाे छ । अहिलेसम्म रूसमा २ लाख ९ हजार बढी मानिस काेराेनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
काेराेनाका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या भने १ हजार ९१५७ पुगेकाे छ । संक्रमितमध्ये ३४ हजार बढी पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ १ लाख ७३ हजार बढीमा काेराेना संक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये २३ सयकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
कोरोनाले भयावह बनाएकाे अर्काे देश हाे, फ्रान्स । फ्रान्समा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको १ लाख ७६ हजार ९७० पुगेकाे छ भने मृत्यु हुनेको संख्या २६ हजार ३८० पुगेको छ ।
संक्रिमतमध्ये ५६ हजार २१७ पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ९४ हजार बढीमा काेरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये २ हजार ७७६ जनाकाे अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
जर्मनीमा पनि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ७१ हजार ८७९ पुगेकाे छ । मृत्यु हुनेको संख्या भने ७ हजार ५६९ पुगेको छ । अहिले जर्मनीमा १९ हजार ९१० मा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १ लाख ४४ हजार ४ सय भने पूर्णरुपमा निको भइसकेका छन् । जर्मनीमा यति निको हुनु भनेको सुखद पक्ष हो ।
ब्राजिललाई पनि काेराेनाले निकै सताएकाे देखिन्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ काेराेनाबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या १ लाख ६२ हजार पुगेकाे छ भने काेराेनाका कारण मृत्यु हुेकाे संख्या ११ हजार १२४ पुगेकाे छ । संक्रमितमध्ये ६४ हजार ९५७ पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ ८ हजार ३ सयकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
टर्कीमा पनि काेराेना संक्रमित हुनेकाे संख्या एक लाख ३३ हजार नाघेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ३ हजार ७८६ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । संक्रमितमध्ये ९२ हजार ६९१ भने पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ४२ हजारमा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये ११ सयकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
इरानमा टर्कीभन्दा कम संक्रमित भए पनि मृतककाे संख्या भने बढी रहेकाे छ । अहिलेसम्म इरानमा काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या ६ हजार ६६० पुगेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ १ लाख ७ हजार ६०३ संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये ८६ हजार १४३ निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ १४ हजारमा मात्रै काेराेना सक्रिय रहेकाे छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीनमा भने अहिले १४८ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । त्यहाँ ७८ हजार १२० जना भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म कुल ८२ हजार ८९० जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । चीनमा काेराेनाका कारण ४ हजार ६३३ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।